Zimbabwe Police Resume Drive to Raze Slums - The New York Times
Africa|Zimbabwe Police Resume Drive to Raze Slums
By MICHAEL WINES JULY 27, 2005
JOHANNESBURG, July 26 - The Zimbabwean police resumed a slum-demolition campaign on Tuesday, hours after the United Nations secretary general, Kofi Annan, accepted a government invitation to view firsthand the impact of the widely condemned program.
Mr. Annan's special envoy, a Tanzanian economist named Anna Kajumulo Tibaijuka, reported to him on Friday that the slum demolitions were a "disastrous venture" that had "unleashed chaos and untold human suffering." Mr. Annan agreed to go to Zimbabwe after its president, Robert G. Mugabe, had denounced the report as hostile and biased, even as Mr. Annan called it "profoundly distressing."
Hundreds of thousands of impoverished Zimbabweans have fled to the countryside or have been herded into makeshift camps after being ousted from their homes by the two-month-long campaign, dubbed "Operation Drive Out Trash" by Mr. Mugabe's government.
Mrs. Tibaijuka's unusually blunt report to Mr. Annan said that the forced evictions constituted "a humanitarian crisis of immense proportions," and demanded that "the culprits who have caused this man-made disaster be brought to book." Both Zimbabwe's neighbors and the African Union, the continentwide body charged with setting economic and human-rights standards, have either praised Mr. Mugabe's campaign or deemed it an internal matter outside their control.